Xogihii iyo Ilaha Wararka ee ugu danbeeyay ee cudurka Coronavirus (COVID-19) looguna Talagalay Qoysaska| Boston School Finder
Xogihii iyo Ilaha Wararka ee ugu danbeeyay ee cudurka Coronavirus (COVID-19) looguna Talagalay Qoysaska
Aalada Boston School Finder, waxaan aqoonsanahay in aan ku jirno waqti adag ayadoo ay qasab tahay in bulshadeenu raacaan isbadelada adag ee ku yimid qaababkeena caadiga ah ee nolosha anagoo isku dayayna yareynta faafida cudurka COVID-19, oo ah cudur ka dhasha caabuqa coronavirus. Shaqadeena ayaa mar kasta diirada lagu saaraa xoojinta xogta sida fudud loo fahmi karo ee aan siinayno qoysaska — sidaas ayuuna sii ahaanayaa xataa markaan waajahayno masiibada cudurka saf marka ah ee coronavirus.
Waxaan aruurinaynaa ilo xogeed oon siinayno qoysaska si aan idiin taageerno inta lagu jiro waqtigaan. Boggaan si joogto ah ayaa wax loga badelayaa.
Guji xiriiriyeyaasha hoose si aad si dhaqso leh ugu aaddid:
Xogihii ugu Danbeeyay ee Dugsiga
Qoraal BOSCOVID illaa 99411 si aad uga hesho farriimaha qoraalka ee magaalada.
Centers for Disease Control & Prevention (CDC, Xaruunta Ka hortaga iyo Xakamaynta Cudurka)
Dugsiyada Dadweynaha Boston COVID- 19 Cusbooneysiinta
COVID- 19 Cusboonaysiinta loogu talagalay Charter Public Schools, Dugsiyo Gaarka loo leeyahay & METCO
Akhri xog badan oo ku saabsan Waxa aad Samaynayso Haddii aad Jiran tahay ee ku jirta webseetka U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Booqo Quraac Bilaash ah & Goobaha Qadada bogga si u hesho liiska iskuulada 'BPS' oo cuntada lagu diyaarin karo.
DHAMMAAN daryeelka carruurta ku saleysan xarunta iyo barnaamijyada daryeelka carruurta ee qoyska waxay xiran yihiin laga bilaabo Maarso 23 illaa Abriil 6 , 2020 , iyadoo uu amro Guddoomiyaha Gobolka. Barnaamijyada Xannaanada Ilmaha ee degdegga ah ayaa laga heli karaa, laakiin fadlan dib u eeg tilmaamaha hoosta:
Barnaamijyada Xannaanada Ilmaha ee Ka-dhaafka ah: Ha la xiriirin barnaamijka daryeelka ilmaha ee degdegga ah inaad u baahan tahay xaalad deg-deg ah, kalkaalin, daryeel-la-imaad. Mudnaanta waa in la siiyaa dadka ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn shaqaalaha daryeelka caafimaadka, shaqaalaha muhiimka ah ee gobolka iyo shaqaalaha adeegga aadanaha, COVID- 19 shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha dukaannada raashinka, shaqaalaha gurmadka degdegga ah, xoojinta sharciga, gaadiidka iyo kaabayaasha, shaqaalaha fayadhowrka, DCF- Qoysaska ku lugta leh, iyo qoysaska ku nool hoyga.
Sideen ku heli karaa Barnaamijka Daryeelka Ilmaha ee Degdegga ah?
Waxaad ka heli kartaa liistada ee bixiyeyaasha daryeelka degdegga ah ee daryeelka degdegga ah halkan . (Fadlan la soco: liistadani waxay ku saabsan tahay gobolka Massachusetts oo dhan, maahan oo keliya Boston.) Liiskani wuxuu sii socon doonaa cusboonaysiinta maadaama barnaamijyo badan la oggolaaday. Waalidku waxay mas'uul ka noqon doonaan inay gaaraan barnaamijyada shaqsiga ah.
Haddii shaqadaada ay saameysay COVID- 19 , fadlan booqo Massachusetts Waaxda Caawinta Shaqo La'aanta (DUA) si aad u ogaato inaad u qalanto faa'idooyinka shaqo la'aanta.
Waxaa jiray carqaladeyn dhanka adeegga ah oo ay ugu wacan tahay COVID- 19 dhanka gaadiidka dadweynaha ee Magaalada Boston. Booqo websaydha MBTA si u hesho digniinta ugu dambeysa ee adeegga iyo cusboonaysiinta.
Magaalada Boston waxay aruurisay dhowr ikhtiyaar oo lacag la’aan ah ama qiime jaban ah oo ay ku heli karaan dhammaan deganayaasha Boston halkan: Taageerooyinka Xiriirinta Internetka Inta lagu Jiro COVID- 19 Jawaabta .
Dugsiyada Dadweynaha Boston waxay abaabulayaan u qaybinta kumbuyuutarrada kombuyuutarrada gacanta lagu qaadan karo ee loo yaqaan 'Chromebook laptop' ee ardayda DDB ee aan ku heli karin kombiyuutar joogto ah guriga.
Fadlan booqo boggan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida qoyskaaga loo helo Chromebook.
Haddii aad aado dugsi aan ahayn BPS, fadlan toos ula xiriir dugsigaaga .
Hadaad ubaahantahay agab kobcinta barashada guriga ee caruurtaada:
Hadaad ubaahantahay fikrado howlo aad laxiriri karto caruurtaada:
EdNavigator wuxuu dhejin doonaa cusbooneysiin maalinle ah oo ah " One Great Thing " si uu ula sameeyo carruurtaada maalin kasta.
Qado Doodles la Mo Willems : Caruurta ku salaysan MA ' s qoraaga buugga iyo muujiye iyo Kennedy Center Artist-in-deganaanshaha dalabyo ah 30 -isweydaarsiga tahay live-Streaming -minute maalin kasta at 1 : 00 PM.
Sida aan ka helno wax updates ku saabsan sida COVID- 19 saamayn laga yaabaa in geedi socodka diiwaangelinta dugsiga ama diiwaan-socda durba horumar, waxaan ' wargelin doonto qoysaska via qoraalka. Qoraalka " DUGSIGA " ilaa 33777 si aad uheshid digniintan diiwaangelinta iskuulka ee gaarka ah taleefankaaga.
Dhammaan Xarumaha Soo-dhaweynta ee Dugsiyada Dadweynaha Boston ayaa hadda ah xiran . Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan isdiiwaangalinta Adeegyada ' iyo hanaanka meelaynta sanad dugsiyeedka soo socda ayaa la heli doonaa maalmaha soo socda.